१३ वर्षसम्म दिसा नगरी बाँचे यि व्यक्ति – Todays Nepal
१३ वर्षसम्म दिसा नगरी बाँचे यि व्यक्ति
एजेन्सी । के कुनै मानिस दिसा नगरीकन बढीमा एक हप्तासम्म बस्न सक्ला ? यो सोच्नै पनि गाह्रो हुन्छ । तर यहाँ एकजना मानिस चाहि १३ वर्षसम्म दिसा नगरीकन बाँचे ।यो घटना अमेरिकाको हो । अहिले ती मानिसको आन्द्रा अमेरिकाको फिलाडेल्फियास्थित मुटर संग्रहालयमा राखिएको छ ।
कसैलाई पनि पत्यार लागेको थिएन की आखिर कुनै व्यक्ति १३ वर्षसम्म दिसा नगरीकन कसरी जिवित रहन सक्दछ ? सायद यो दुनियाकै पहिलो तथा सबैभन्दा अनौठो घटना थियो ।
वास्तवमा ती व्यक्तिलाई गम्भीर खालको कब्जियत थियो । Hirschsprung’s Disease नामक रोगका कारण उनको आन्द्रामा गम्भीर खालको रोकावट आयो । जसका कारण उनले दिसा गर्न सकेनन् । अन्त्यमा २९ वर्षको उमेरमा कब्जियतकै कारण उनको मृत्यु भयो । पछिल्लो १३ वर्षमा उनले दिसा गरेका थिएनन् ।
ओली र मेरोबीच झगडा पार्न सामाजिक सञ्जालमा बिर्सिसकेको कुराहरु भाइरल हुँदैछ : प्रचण्ड
राजा बिरेन्द्र र रानीको त्यो गोप्य सम्बाद : जस्ताको त्यस्तै